Amakhandlela Esipho Esinephunga Elimnandi Lesitolo esidayisa yonke impahla anefektri ye-wax yesoya yemvelo kanye nabakhiqizi |Winby
Amakhandlela Esipho Esinephunga Elimnandi Lesipho anengcina yesoya yemvelo
I-WAX YEMVELO engu-100% - Yenziwe nge-wax yesoya ehlanzekile engu-100%.Nikeza into ehlanzekile, ukusha okude.ukushisa okulinganayo futhi kungabikho ntuthu emnyama, enempilo kakhudlwana, engenangozi emzimbeni womuntu nendawo.Ikunikeza ukusha okuhlanzekile namahora ahlala isikhathi eside wentokozo enamakha.
Ikhandlela le-aromatherapy lisusa iphunga elibi nephunga elingafuneki ngempumelelo, gcina umoya uhlanzekile futhi umusha.Kuhle kakhulu ekunciphiseni ukucindezeleka.
Usayizi: 6.2cm (Ububanzi)*5cm (Ubude)
Ikhandlela lethayela elincane le-wax elinemibala eminingi elishisayo elishisayo
Lawa makhandlela avalwe ngokubukeka okuhle, akulungele ukuthi uwaphathe noma kuphi lapho uya khona!
Ukudala imikhathi ethuthukisa isimo sengqondo nokuphumula kwakho nezivakashi, kuphinde kukwenze isipho esifanele sanoma yisiphi isenzakalo!
Iziqukathi zekhandlela zinhle, zilungele ukuhlobisa ikhaya lakho noma ukugcina ezinye izinto ezincane uma sezisetshenzisiwe.Idizayini yokuhamba kancane yenza kube lula ukuthwala uye eholidini futhi kube lula ukupakisha ukuhamba ngaphandle kokukhathazeka ngokuphuka kweziqukathi.
Isevisi yesampula iyatholakala.
Ukucaciswa kwekhandlela lethayela
Okubalulekile Ithini likathayela + i-parafini wax/i-soy wax +iwikhi kakotini+isivalo sensimbi
Isisindo esikhulu awu 95g
Isithombe esinemininingwane yekhandlela lethayela elenzelwe wena uqobo
Okwedlule: Izimbiza Zekhandlela Ezingenalutho zokwenza amakhandlela
Olandelayo: I-chakra ehlobisa amakhandlela esoya anamakristalu esitokweni
Isiko Lokuhlobisa Ikhandlela Lengilazi elinephunga elimnandi